Chautari Daily » विदेशी मुद्रा : आजको विनियमदर कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
विदेशी मुद्रा : आजको विनियमदर कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्रबैकंले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज कुवेत र बहराईन दिनारसहित प्राय सबै देशको भाउ उकालो लागेको छ । त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रिदर १४१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रिदर १४१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३५ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३०४ रुपैयाँ ८० पैसा तथा बिक्रिदर ३०६ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।त्यस्तै कुवेती दिनाार एकको खरिदर ३७८ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३८० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ।
प्रकाशित मिति १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०२:१८